K-pop သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ MV (၅) ပုဒ်
K-pop ရဲ့ MV တွေဟာ အသေအချာပြင်ဆင်ပြီးမှသာ ရိုက်ကူးကြတာကြောင့် ကြည့်ရှုရသူ ပရိသတ်တွေအဖို့ စိတ်ကျေနပ်မှုတွေ၊ မျက်စိပသာဒဖြစ်စရာကောင်းတဲ့ MV တွေအဖြစ်နဲ့ ထွက်ရှိလာကြပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကောင်းမွန်လှတဲ့ MV ကောင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖန်တီးပုံဖော်ရိုက်ကူးဖို့ရာမှာလည်း ငွေကြေးကုန်ကျမှုကို မြောက်များစွာအကုန်ခံပြီးရိုက်ကူးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးချင်တဲ့ MV (၅) ပုဒ်ကတော့ K-pop သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ MV တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘယ် MV တွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ရှုစားကြည့်လိုက်ကြပါဦး။
Super Junior's 'Devil' ($300,000 USD)
Super Junior ရဲ့ "Devil" MV ဟာဆိုရင် သာမန် MV တွေနဲ့ ကွဲထွက်နေပြီး အက်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားပုံစံမျိုး ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုက်ကူးမှုကုန်ကျစရိတ်က ကန်ဒေါ်လာ ၃ သိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီး အဲဒီပမာဏဟာ နဂိုမှန်းထားတဲ့ပမာဏထက်တောင် နည်းပါးနေသေးပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်ကို ဘယ်လောက်တောင်များ ခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာပါလိမ့်။
Super Junior's 'Devil'
2NE1's 'Come Back Home' ($500,000 USD)
နာမည်ကြီး အမျိုးသမီး Idol အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ 2NE1 ရဲ့'Come Back Home' MV မှာဆိုရင် Special Effect တွေ များစွာထည့်သုံးထားကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဂရပ်ဖစ်နဲ့ ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ ဒီ MV ဟာဆိုရင် K-pop လောကရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ MV တစ်ပုဒ်အဖြစ်နဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း ရိုက်ကူးမှုကုန်ကျစရိတ်ဆိုရင် ကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်းလောက် ခန့်မှန်းထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
2NE1's 'Come Back Home'
B.A.P.'s One Shot ($900,000 USD)
B.A.P ရဲ့ 'One Shot' MV ဟာဆိုရင် K-pop လောကရဲ့ အကောင်းဆုံးနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ MV တစ်ပုဒ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခမ်းနားကြီးကျယ်ပြီး မင်တက်စရာကောင်းလှတဲ့ ရိုက်ကူးချက်တွေနဲ့ ပုံဖော်ထားတဲ့ ဒီ MV ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ ကန်ဒေါ်လာ ၉ သိန်းမျှ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
B.A.P.'s One Shot
INFINTE's Destiny ($900,000 USD)
INFINTE ရဲ့ Destiny MV ကတော့ ကန်ဒေါ်လာ ၉ သိန်းနဲ့ ပုံဖော်ထားတဲ့ MV တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး လေယာဉ်ပျံအစစ်ကြီးတွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ရိုက်ကူးမှုကုန်ကျစရိတ်ဟာ ဒီလောက်အထိ ကုန်ကျခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
T-ara's Cry Cry & Lovey Dovey ($1 million USD)
T-ara ရဲ့ Cry Cry နဲ့ Lovey Dovey MV တွေကတော့ ဒီစာရင်းမှာ ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးဆိုတဲ့ MV တွေအဖြစ်နဲ့ပါဝင်လို့နေပါတယ်။ ဒီ MV ၂ ပုဒ်ရဲ့ ရိုက်ကူးမှုကုန်ကျစရိတ်က တစ်ပုဒ်ကို ကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်းဆီမျှရှိပြီး 'Cry Cry' MV ဆိုရင် K-pop သမိုင်းရဲ့ ကြာချိန်အမြင့်ဆုံးသော MV တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
T-ara's Lovey Dovey